कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम रहेका कारण अहिलेसम्म खोटाङ र मनाङ जिल्लामा भने निषेधाज्ञा लगाइएको छैन ।
बिहान ०९:५७ बजे
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । ६१ जिल्लामा भोलिदेखि र चारवटा जिल्लामा आजदेखि निषेधाज्ञा सकिँदैछ । यी जिल्लामा पुनः निषेधाज्ञा थप्ने तयारी छ ।
यसअघि निषेधाज्ञाको अवधि सकिएका ९ जिल्लाले निषेधाज्ञा थपिसकेका छन् । सप्तरीमा भने अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि आंशिक निषेधाज्ञा लगाइएको छ ।
सप्तरी, ताप्लेजुङ र मुस्ताङमा आंशिक र बाँकी ७२ वटा जिल्लामा पूर्ण रुपमा निषेधाज्ञा छ । दाङमा आउँदो असार १ गतेसम्म, हुम्ला, रामेछाप र सल्यानमा असार २ गतेसम्म, भोजपुर, धनकुटा र चितवनमा असार ३ सम्म, गोरखामा असार ५ सम्म र उदयपुरमा असार ७ गतेसम्म निषेधाज्ञा छ ।
पहाडी र हिमाली जिल्लामा दुई सय र काठमाण्डौ उपत्यका तथा तराईमा पाँच सय सक्रिय सङ्क्रमित भए जिल्लाभर वा निश्चित क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा तथा आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार छ ।
व्यवसायी, रोजगारी र उद्योगको दिगो विकासका लागि पूल भएर काम गर्छु : उमेदवार साह
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । आगामी चैत्त २८ गते जनकपुरमा हुने जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको चुनावको तयारी तीव्र रुपमा गरिएको छ । जनकपुरका व्यावसायी, व्यापारीहरु अहिलेदेखि नै चुनावको तैयारीमा जुटेका छन् ।
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । आगामी चैत्त २८ गते जनकपुरमा हुने जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको चुनावको तयारी तीव्र रुपमा गरिएको छ ।
जनकपुरका व्यावसायी, व्यापारीहरु अहिलेदेखि नै चुनावको तैयारीमा जुटेका छन् । सँघको महाधिवेशन नजिकिएसँगै उमेदवारहरुले आ–आफ्ना पक्षमा मतदान गर्नको लागि मतदाता व्यावसायी, व्यापारीहरुलाई रिझाउन लागि परेका छन् ।
चुनावमा व्यावसायी, व्यापारीहरुको हकहितको लागि पनि उम्मेदवारीहरुले उम्मेदवारी दिएको दाबी गरिरहँदा जनकपुरका कुशल व्यावसायी मानिएको परमेश्वर साह पनि सँघको कोषाध्यक्ष पदको लागि गृहकार्य थालेका छन् । उनले जनकपुरका व्यापारी, व्यावसायीहरुको लागि के के गर्ने ? तपाईलाई नै मत किन दिनुपर्ने ? भनेर पनि सोध्यौ, उहाँसँग गरिएको सँक्षिप्त कुराकानी यस प्रकार छ :
तपाईको उमेदवारी किन ?
राज्यलाई निजी क्षेत्रले सहयोग नै गर्ने हो, सहयोग गर्दै हिँडेका पनि छौं । हिजो जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा उद्योग वाणिज्य संघहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै हो । अहिले तिनै तहको निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व आएर पनि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने, निजी क्षेत्रको कुरा सुन्ने विषयमा नसुनेको हो कि वा हामीले पनि सरकारलाई बाटो देखाउन नसकेको हो भन्ने छ ।
केही कुरा सुने जस्तै पनि गर्ने तर कार्यान्वयन हुँदैन, कार्यान्वयन कठिनाइ छ । सरकार र निजी क्षेत्रसँगसँगै नहिडेसम्म देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव पनि छैन । सरकारको समृद्धिको नारा अधुरो नै हुन्छ ।
तपाईले निर्वाचन जित्ने आधार के–के हुन त ?
सर्वप्रथम त जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघलाई मर्यादित अनुशासित र क्रियाशिल बनाउँदै आउनुभएका कार्यसमिति एवम् सम्पूर्ण सदस्यहरुमा हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु ।
संघमा रहेका समस्या चुनौती र सम्भावनाको व्यापक अध्ययन गरी हजुरहरुबाट स्थापित र संरक्षीत, हालसम्म गरेका विकासका विधि प्रक्रिया र उद्योगी व्यवसायीको पिरमर्का र समस्याको सामना गर्ने र समाजमा रहेका आफ्नो पहिचान चिन्न नसकेका वेरोजगारी र कुनै गन्तब्य नभएका युवा युवती, समाजमा दुव्र्यसनीमा फसेका युवा युवतीलाई प्राविधिक सिप र परामर्शबाट वास्तविक जिवन पहिचान गरी सिपयुक्त जनशक्तीको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य नै मेरो निर्वाचित हुने आधार हो ।
विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई कसरी हुन्छ बलियो बनाउनेतर्फ नै नेतृत्व लाग्नुपर्छ । अरु छिन्नभिन्न भएको संस्थालाई, लगानीकर्तालाई एकै ठाउँमा ल्याएर निजी क्षेत्रकै सिंगो संस्था सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
मलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनु भयो र समाजमा रहेका शिक्षित, अशिक्षत, आंशिक शिक्षित सम्पुर्ण युवा युवतीलाई सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्दछु । जनकपुरधाम वाणिज्य संघका सबै संस्थापक एवं वर्तमान सम्मका सम्पुर्ण सदस्यहरुमा नमन गर्न चाहन्छु ।
मैले मेरो जिवनमा लिएको लक्ष्य एवं सामाजिक दायित्वमा यहाँहरुको अमुल्य मतले अझ सशक्त रुपमा कार्य गर्ने मेरो क्षमता वृद्धि हुने आशा एवम् विश्वासका साथ हार्दिक नमन गर्दछु ।